အလှူဒါနပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများမသိကြပါဘူး..ယခုဘ၀ဒါနပြုရင် နောက်ဘ၀ကောင်းစားမယ် နတ်ချမ်းသာ လူချမ်းသာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပဲ အလှူဒါနပြုနေကြတာများပါတယ်.
၀ါတွင်းကာလတွေမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ သာသနာယဉ်ကျေးမှု ၀ိနည်းတော်အရ ရဟန်းတော်တွေဟာ ၀ါဆိုဝါကပ်ကြရပါ တယ်။ သံဃာတော် အရှင်မြတ်တွေရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဒီဓလေ့ကို အတုယူ အားကျကာ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ တွေကလည်း ၀ါတွင်းကာလမှာ ဥပုသ်သီလကို ဆောက် တည် ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
ဘုရားက ဘာကိုဆုံးမ ထားသလဲ...ဆိုတော့
သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ဘုရားအဆုံးအမ ကို ရင်ထဲ နှလုံးထဲ ရောက်သွားအောင်. တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပို့ပေးရတာ။ ဘုရားအဆုံးအမ ဆိုတာ က ယူနီဗာဆယ်။ ဘယ်နေရာမဆိုသုံးလို့ရတယ်။ ဘုရားရှင်က စီးပွါးရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး. လူမှုရေး.နိုင်ငံ ရေး စစ်ရေးပါမကျန် သူ့နေရာနှင့် သူ အသုံးချရတာပါ။
လောကလူတွေက ဒါနကောင်းမှု မလုပ်တာက မရှိလို့မဟုတ်ဘူး၊ များသောအားဖြင့် မေ့လို့
မလှူကြတာ။ မေ့တယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်မေ့တာတုန်းဆို မအားဘူးလေ၊ ဘယ်သူ့ပဲမေးကြည့်
လိုက် မေးကြည့်လိုက် အားတဲ့သူ ဘယ်ရှိမှာလဲ၊ မအားဘူး။ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ မအားဘူးပဲ။ အဲဒီ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:34 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ
ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ သမထဘာဝနာကုသိုလ်၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်၊
မဂ်ကုသိုလ်၊ ဖိုလ်ကုသိုလ် ခြောက်မျိုးလုံးကို အရယူရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားဥစ္စာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:32 AM No comments:
ဘုရားလောင်း တုဿီတာ နတ်ပြည်မှ ကြည့်ခြင်း ၅ ပါးမှာ = =
၁။ ကာလ = ဘုရားဖြစ်အံ့သော ကာလကို ကြည့်တော်မူခြင်း။
၂။ ဒေသ = အရပ်ကို ကြည့်တော်မူခြင်း။
၃။ ဒီပ = ဖြစ်ရာ ကျွန်းကို ကြည့်တော်မူခြင်း။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:31 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:29 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:28 AM No comments:
ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါ…ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ရုပ်တရား ဖောက်ပြန်မှုဟာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါးမှာ တစ်ပါးပါးကြောင့် ဖောက်ပြန်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတ္တ၀ါတစ်ဦးချင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကံ ပစ္စုပ္ပန်ကံတွေကြောင့် ရုပ်တရား ဖောက်ပြန်တတ်သလို စိတ်ကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရာသီဥတုကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်သလို၊ အစားအစာတွေကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ခြင်ပြီး စားကြမယ်ဆိုရင် ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကို သိသိသာ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာကလည်း အခက်သား။ စွဲမိပြီဆိုရင် ဘာမဟုတ်တာလေး အပေါ်မှာလည်း စွဲလမ်းမိပြီး ဖြတ်ဖို့ခက်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ တစ်ခုခုကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နေရာဒေသ တစ်ခုခုကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုခုကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ် မြင်နေတွေ့နေ ရင်းနှီးနေတော့ မရှိရင်၊ မမြင်ရင်ကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု လိုနေသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီပစ္စည်းဝတ္ထုလေး
ဘာကြောင့် သောတာပန် ဖြစ်ချင်ရတာလဲ။
သိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ အားလျော်စွာ အကုသိုလ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ
လောကမှာ ဘုရားပွင့်လာတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ ပွင့်လာတာ
ပရိယတ်ကို အခြေခံရန် ဆရာတော်ကြီး၏ အဆုံးအမ။
ဆိုပေမယ့် သာသနာကြီး အရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်တော့ သူချည်း မပြီးသေးဘူး။ ပရိယတ်
“ ဒါနတောဘောဂ၀ါ ” သိပ်အကျိုးများမှာလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရ ဖန်တီးရှင်ဆိုတာ အပြင်အပ မမြင်ရသည့် တန်ခိုးရှင်များကို မဆိုလို၊ မိမိပြုအပ်သော ကောင်းကံ ဆိုးကံသည်သာ ဘ၀၏ဖန်တီးရှင်များဖြစ်ကြသည်အတွက် မိမိသည်သာ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာ ဖြစ်တော့သည်။ လောကကို အလှဆင်သည်မှာလည်း
(၁) ဥဿူရံ - နေမြင့်အောင်အိပ်ခြင်း။
(၂) အလသျံ - ပျင်းရိခြင်း။
(၃) စဏ္ဍိက္ကံ- အပြောအဆို၊အလုပ်အကိုင်၊အမူအကျင့်များ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ခြင်း။
(၄) ဒီဃသောဏ္ဍိကံ- သေရည်၊သေရက်၊မူးယစ်သေစာ သောက်စားကြူးခြင်း။
(၅) ဧကဿ အဒ္ဓါနဂမနံ- အဖော်ကောင်းမပါ တယောက်တည်း ခရီးရှည်သွားခြင်း။
(၆) ပရဒါရူပသေ၀နာ- သူ့သား၊မယားအားပျော်ပါး ပြစ်မှားဖျက်ဆီးခြင်း။
ငါ့ဘ၀ကို ပတ်ခြောက်ဝိုင်းလို လူကြည့်အောင်ပဲ နေသွားမှာလား? ။
ဒိုးပတ်ဝိုင်းအတိုင်း ၀ါးနဲ့ချိုးပြီး စက္ကူနဲ့ လုပ်ထားတာ၊ နှဲဆိုရင်လဲ နှဲအတိုင်း ၀ါးနှီး စက္ကူနဲ့ လုပ်ထား
ဘိက္ခုနီတွေ ပေးရတဲ့ ၀န်ခံဂတိ (၈) မျိုး အနက် နံပါတ် ( ၁ ) အချက်ကို German မလေးက ဘုရားက မတရားဘူး၊ ခွဲခြားတယ်ဆိုပြီလာလျှောက်လို့ ဆရာတော် ဖြေကြားထားတဲ့ အဖြေလေးပါ။
တော့ “အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်” ကို ပြင်ရမယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီဆိုတာ ဘယ်အဆင့်ကျမှ
အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရသလဲ ဆိုရင် ရဟန္တာဖြစ်သွားမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲ။
တရားတော်တွေကို စဉ်းစားနေရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
လောကကြီးအကြောင်း တွေးနေရတာ သံဝေဂဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကို ချမ်းသာအောင် မထားတတ်သေးဘူးဆိုရင်
အခါတပါး ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည် ၀ဇ္ဇီတိုင်း ဥက္ကစေလမြို့၊ ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းတွင် သီးတင်းသုံးတော်မူ၍ နောက်ပါရဟန်းတော်တို့အား ဂင်္ဂါမြစ်ကြီးကို ဥပမားထားကာ တရားတော်ကို ဟောကြားတောမူပါတယ်။
ချစ်သားရဟန်း .. ဒီဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းမှာ ရှေ့ကဖြစ်ဖူးခဲ့သည်မှာ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး တန်ဆောင်းမုန်းလမှာ မာဂဓတိုင်းသား နွားကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် သူ၏နွားအုပ်ကို ဂင်္ဂါမြစ်တစ်ဖက်ကမ်း၌တည်ရှိသော ၀ိဒေဟတိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ရန် မြစ်ကိုဖြတ်ကူးဖို့အားထုတ်လေ၏။
ဘုရားရှိခိုးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောင်းသောသဘာဝတရားများ နှင့် မကောင်းသော သဘာဝတရားများကို ဟောကြားပေးခဲ့သည်။ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
ရုပ်နာမ်တို့သည် ဖြစ်ပြီး ပျက် ပျက်သွားသည့်အတွက်၊ ဆင်ရဲခြင်းသဘောဆောင်၏။
သုံးအင်လက္ခဏာ၊ သင်္ခတာ“ သင်္ခတ၊
ဆိုရင် အာရုံပြုကြည့်၊ ဘုန်းကြီးတို့တတွေမှာ ကာယဆိုတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ရှိတယ်နော်၊ အာရုံကို
ခန္ဓာဆိုသည်မှာ မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ပါ။ ခန္ဓာဆိုသည်မှာ အပေါင်းအစုသာ
ဖြစ်သည်။ လူတွင် ခန္ဓာငါးပါးသာရှိပါသည်။ ၄င်းတိုပမှာ=
၁။ ရုပ် = ရူပက္ခန္ဓ = ရုပ်အစု ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရား။
၂။ နာမ် = ဝေဒနက္ခန္ဓ = ဝေဒနာအစု ခံစားမှုသဘောတရား။
ငယ်များကို အခကြေးငွေဖြင့် ပီယသိဒ္ဓိဆေးများ စုတ်တံဖြင့် ပေါက်ပေးလျက်ရှိ၏။
ထိုဆေးပေါက်ပြီးလျှင် သူဌေးသမီးကို တစ်ခါလှမ်းကြည့်ရုံနှင့် နောက်မှ တစ်ခါတည်း
လောကကို လွှမ်းမိုးထားသော အမှန်တရားတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ဒုက္ခသစ္စာ
လောကမှာ လူတွေ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြတာ၊
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ နေ့စဉ် ပြေးလွှား နေကြတာဟာ “ချမ်းသာသုခ” ကိုရှာဖွေဘို့ အလုပ်များနေကြတာပါ။ ဘယ်လိုပဲ အပင်ပန်းခံပြီး သုခကိုရှာဖွေ သော်ငြားလည်း လူသားတွေနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာတော့
မြတ်စွာဘုရားရှင်သီတင်းတော်မူတဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ကောင်းဒါယကာ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးမှာ သုဇာတာဆိုတဲ့ချွေးမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ထိုသုဇာတာ သတို့သမီးက လင်ဖြစ်သူရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမမှုကို မနာခံသလို၊ယောက္ခမဖြစ်သူရဲ့ ဆုံးမ စကားကိုလည်း ကလန်ကဆန်ပြန်လုပ်ပြီး ရန်တွေ့တတ်တယ်
စိတ်ဆင်းရဲခြင်း အကြောင်းရင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဘုရားကို မေးခဲ့ဖူးသည်။
“မြတ်စွာဘုရား လူနတ်သတ္တဝါအများတို့သည် ရန်ကင်းငြိုးလျက် ဒဏ်ကင်းလျက် ရန်သူကင်းလျက် စိတ်ဆင်းရဲကင်းလျက် အမျက်ထွက်ခြင်းကင်းနေရခြင်းကို လိုချင်တောင့်တကြပါကုန်၏
ဆဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ(၃)။
လောကဓာတ်တစ်ခု၌ စကြာဝဠာ ၁,၀၀၀၊ လောကဓာတ်ဆယ်ခု၌ စကြာဝဠာ ၁၀,၀၀၀၊ ထိုမှ နတ် ဗြဟ္မာတို့သည် ရှေးဘုရားရှင်တို့လက်ထက်, ယ္ခုဂေါတမဘုရားလက်ထက်နှင့် နောက်ပွင့်လာမည့် ဘုရားရှင်တို့ လက်ထက်၌ - ဗုဒ္ဓနှင့် သံဃာတို့ကိုဖူးမျှော်ခြင်းငှါ စုဝေးရောက်လာလေ့ရှိသည်။ ထိုရောက်လာသော နတ်ဗြဟ္မာတို့အမည်များကို "ဒီဃနိကာယ်-မဟာဝဂ်-မဟာသမယသုတ်မှာ" ဗုဒ္ဓက ထုတ်ဖော် ဟောကြား (ပြောဆို) ခဲ့ပါသည်။
(၃၁)ဘုံ ရှိ၊ မရှိ ... ?
သိပ္ပံပညာ သိပ်တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လက်တွေ့မှ ယုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေရဲ့ ဒီမေးခွန်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ်မှာ ယုံကြည်တဲ့သူတွေရော၊ မယုံကြည်တဲ့သူတွေရော
ဒီမေးခွန်းလေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့် ပါတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အဖြစ် အပျက်လေးတစ်ခုကို အရင်တင်ပြ
ချင်ပါတယ်။ တစ်ခါက မြန်မာနိုင်ငံက
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:16 PM No comments:
ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ...
မနာပ ဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ ဖြေ။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးပေးချိန်နဲ့ တောင်းဆုပြုထားမှု တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့သွားတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားကိုသွားပြီး ဒီလို ပုတီးစိပ်တိုင်း ဆုတောင်းပြည့်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုဆိုတာ ပြုလုပ်တဲ့သူနဲ့ အကျိုးပေးချိန် တိုက်ဆိုင်မှ၊ အကျိုးပေးခွင့်သာမှ အကျိုးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးပေးချိန် မတန်သေးရင် ကောင်းတာတွေ လုပ်နေပေမယ့် မကောင်းတာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတတ်ပြီး မကောင်းတာတွေ
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:15 PM No comments:
အဖန်ငါးရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်သေရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ... ?
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများရဲ့ လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတွေအကြောင်း စာတွေရေးပေးနေတာသိတော့ ဒကာတစ်ယောက်က
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုပဲ သတ်သေပြီး သေရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား၊ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် တပည့်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရဟန်းတစ်ပါးဟာ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုကိုယ် ဓားနဲ့လှီးပြီး သတ်သေသွားပေမယ့် အဲဒီအခိုက်မှာ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်၊ ရဟန္တာဖြစ်သွားရင် နောင်ဘဝ မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လားဘုရား၊ ဒါဆိုရင် ဒီအဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာခံရတဲ့ကိစ္စ တပည့်တော် ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ဘုရား”
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:14 PM No comments:
ကံတရားဆိုတာ တခြားမှဝင်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ စိတ်ရင်းမှ ဖြစ်ပေါ်
တော်မူကြပေ။ အကုသိုလ်နှင့် ကုသိုလ် ရောထွေးနေသော တစ်သိန်းနှင့် တစ်ရာတမ်း ကြားတွင်
လပြည့် လကွယ် ရှစ်ရက်နေ့တို့ကို ဥပုသ်နေ့ဟု ဘုရားရှင...
ငါ့ဘ၀ကို ပတ်ခြောက်ဝိုင်းလို လူကြည့်အောင်ပဲ နေသွားမ...
လောကကို လွှမ်းမိုးထားသော အမှန်တရားတစ်ခု (သို့မဟုတ်)...
အဖန်ငါးရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်သေရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ...
လိုချင်မှုကို လောဘဟုခေါ်သလို ဆန္ဒလို့လဲခေါ်ပါတယ်။ ...
ပူသည့်မျက်နှာ မှ အေးသည့် မျက်နှာသို့။